ရှယ်ဘီယာကို ဆရာကျကျ ဘယ်လိုမြည်းမလဲ! - Myanmar’s First Brewery: Burbrit Craft Beer
Home / ရှယ်ဘီယာကို ဆရာကျကျ ဘယ်လိုမြည်းမလဲ!
ရှယ်ဘီယာကို ဆရာကျကျ ဘယ်လိုမြည်းမလဲ!
ဒီတစ်ခါဘီယာချစ်သူတွေ ရှယ်ဘီယာ (Craft Beer) ကိုမြည်းစမ်းတဲ့အခါ ဘယ်လိုအချက်တွေကို ကြည့်ပြီးမြည်းရလဲ ဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ရှယ်ဘီယာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဘီယာတစ်မျိုးချင်းဆီမှာ အရောင်၊ ရနံ့၊ အရသာ တွေဟာကွဲပြား နေပါတယ်။ ဒီလိုကွဲပြားပြီး အမျိုးအစား စုံလင်ခြင်းက ရှယ်ဘီယာရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသတစ်ခုပါပဲ။ရှယ်ဘီယာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အခါ ဘီယာကိုလည်ချောင်းထဲမျှောချ၊ လေချင်လေးတက်ပြီး ဒီဘီယာကတော့ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူး ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ ဘီယာမြည်းတယ်ဆိုတာ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ အနုပညာအလုပ်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် အောက်ပါအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြည်းမယ်ဆိုရင် ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးမှုတစ်ခု ချန်ခဲ့မှာ အသေအချာပါပဲ။ရှယ်ဘီယာရဲ့ အနှစ်သာရကို အပြည့်အဝခံစားဖို့ ပထမဆုံးကြည့်ရမဲ့ အချက်က…
၁)🔸 အသွင်သဏ္ဍန် (Apperance)ပထမဆုံး ဘီယာရဲ့အမြုပ်ကိုကြည့်ပါ။ သေးမွှားတဲ့ပူပေါင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမြုပ်ဟာ ထူူထပ်သိပ်သည်း မှုရှိနေရပါမယ်။ အမြုပ်တစ်ခဏအတွင်းပျောက်ပြယ်သွားရင် ဒါမှမဟုတ် အမြုပ်အရွယ်အစားက ငါးမျက်လုံးဆိုဒ်လောက် တွေ့ရင် ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ ဘီယာလိုင်း၊ ဘီယာဖန်ခွက် တွေသန့်ရှင်းမှုမရှိတာ၊ လတ်ဆတ်မှုမရှိတဲ့ဘီယာ စတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အမြုပ်အနေအထားကြည့်ပြီးရင် နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ အရောင်ကိုကြည့်ပါ။ ရှယ်ဘီယာအရောင်တွေကွဲပြား နေတာ ဘီယာချက်တဲ့ မုယောစပါးအမျိုးအစား တွေကြောင့်ပါ။ အရောင်ဖျော့ မုယောစပါးတွေက ပေါင်မုန့် သို့မဟုတ် ပေါင်မုန့်ဖုတ်ထားတဲ့ အရသာတွေရှိပြီး မီးသင်းသကြား(Camamel)၊တော်ဖီအရသာ တွေကတော့ ပယင်းရောင်ရှိတဲ့ဘီယာတွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကော်ဖီ၊ ချောကလက် အရသာတွေကိုတော့ အနက်ရောင်ဘီယာတွေမှာ အတွေ့များပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်နေနဲ့ လေပူပေါင်း(Gas) ပါဝင်မှုနူန်းကိုကြည့်ပါ။ လေပူပေါင်း များသလား၊နည်းသလား ဆိုတာ တက်လာတဲ့အရှိန်ကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ လေပူပေါင်းပါဝင်မှုများခဲ့ရင် ပါးစပ်ထဲမှာ ရှတဲ့အထိအတွေ့များပြီး ဘီယာရဲ့အရသာကို ဖုံးထားသလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရသာသိပ်မရှိတဲ့ဘီယာတွေမှာ လေပူပေါင်းတွေအများကြီးထည့်ထားတာပေါ့။အထက်ပါအချက်တွေကြည့်ပြီး ဘီယာမသောက်ခင် ဘီယာရဲ့အရသာကို အမြင်နဲ့ ကြိုတင်မှန်းစနိုင်ပါပြီ။
၂) 🔸ရနံ့ (Aroma)နှာခေါင်းဝကို ဘီယာဖန်ခွက်ထဲ ဆိုက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ သုံးလေးချိန်လောက် ရှုကြည့်ပြီး ဘာအနံ့တွေ ရလဲ ပထမဆုံး ရှာဖွေကြည့်ပါ။ ချိုမြတဲ့ မုယောစပါးကပေးတဲ့ ဘီစကွတ်၊ကော်ဖီ၊မီးသင်းသကြား အနံ့လား ? ဗျစ်ပွင့်ကပေးတဲ့ အသီးနံ့ ၊ ပန်းပွင့် ရနံ့ လား။ ဒါမှမဟုတ် တစေးကထွက်လာတဲ့ ပရစေး(spices)၊အသီးအနံ့ လား? ဒီနေရာမှာအကြံပေးချင်တာက နှာခေါင်းကို လက်နဲ့ခဏပိတ်ထားပြီး ဘီယာတစ်ငုံလောက်သောက်ပြီး နှာခေါင်းကနေလေမှုတ်ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် နှာခေါင်းရဲ့အာရုံခံ နာ့(မ်)ကြောတစ်လျှောက် ဘီယာထဲပါဝင်တဲ့ ရနံ့မျိုးစုံကို တွန်းထုတ်လိုက်သလို ခံစားမိမှာပါ။
၃) 🔸အရသာ (Flavour)ဘီယာရဲ့အရသာကိုစတင်လေ့လာဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ တစ်ငုံလောက်အရင်သောက်ကြည့်ပြီး လေးငါးစက္ကန့်လောက် အာခေါင်နားမှာ မျိုမချခင် လှုပ်လှည့်ကြည့်ပါ။ လျှာပေါ်မှာရော ဘယ်လိုခံစားရလဲ? မုယောစပါးအရသာက အရင်ထိဒါလား ၊ ဗျစ်ပွင့်အရသာက ထူးကဲနေလား? ဘီယာချစ်သူတို့ ယုံကြည်ချက် မြင့်မားလာလေ မုယောစပါးအရသာ နဲ့ ဗျစ်ပွင့်အရသာကို ကျွမ်းကျင်စွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မှာပါ။ တစ်ချို့ဘီယာ အမျိုးအစားတွေမှာတော့ မုယောစပါးရဲ့ ‘အချို’ နဲ့ ဗျစ်ပွင့်ရဲ့ ‘အခါး’ ကိုမျှတာစွာ ပေါင်းစပ်ထားတာကိုတွေ့နိုင် သလို တစ်ခြားဘီယာအမျိုးအစားတွေမှာတော့ ဗျစ်ပွင့်အရသာကဦးဆောင်နိုင်သလို မုယောအရသာက လွှမ်းမိုးသွားတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရှယ်ဘီယာဆရာဖြစ်ဖို့ အစမှာ အထက်ပါအစွန်းနှစ်ဖက်အရသာကိုပေးတဲ့ဘီယာတွေနဲ့စစေချင်ပါတယ်။ ဘားဘရစ်မှာ မုယောကဲတဲ့ဘီယာ German Weizen, Rangoon Blonde, Porter တွေနဲ့မြည်းစမ်းကြည့်နိုင်ပြီး ဗျစ်ပွင့်အရသာသိသိသာသာပေါ်လွင်နေတဲ့ဘီယာကတော့ Nevada Pale Ale နဲ့ Burma Pale Ale တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၄) 🔸ခံတွင်းခံစားမှု (Mouthfeel)ရှာဖွေရမဲ့ခံစားမှုတွေကတော့ ပျစ်လား၊ကျဲလား၊ရှလား၊ နူးညံ့ပျစ်နှစ်နေလား(creamy) ၊ စိမ့်လား။
၅) 🔸အဆုံးသတ် (Aftertaste)မြည်းကြည့်ပြီး စက္ကန့် ၃၀ လောက်စောင့်ပါ။ အဆုံးသတ်အရသာဆိုတာ နောက်ဆုံး အာခေါင်နဲ့ လျှာပေါ် ကျန်ခဲ့အရသာပါ။ တစ်ချို့ဘီယာတွေမှာ အဆုံးသတ်ကျန်ခဲ့တဲ့အရသာဟာ သောက်နေတုန်း ရတဲ့ဘီယာအရသာနဲ့ သိမ်မွှေ့စွာကွာဟနေတတ်ပါတယ်။ အခါးဓာတ်က အရင်ဆုံးရှာတွေ့မဲ့ အဆုံးသတ်အရသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချိုဓာတ်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားဘာအရသာတွေရော တွေ့မိသေးလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အချဉ်ဓာတ်လား (တချို့ဘယ်ဂျီယမ်ဘီယာတွေဆို ဘီယာကိုချဉ်အောင် Bacteria တွေနဲ့အချဉ်ဖောက်ပါတယ်)? အသီးအရသာရောကျန်နိုင်လား(ပန်းသီး၊ငှက်ပျောသီး၊နာနာတ်သီး စသည့်ဖြင့်)? ပန်းရနံ့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား? ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အရသာကို မြည်းလိုက်တဲ့ဘီယာအမျိုအစားကပေးလား?
ဘီယာချစ်သူတို့ ရှယ်ဘီယာ ဆရာ ဖြစ်ဖို့ အလှမ်းသိပ်မဝေးတော့ဘူးနော်… Cheers!
© 2021 burbrit craft beer